समाचार - हामी पीसीआर प्रयोग पनि गर्दैछौं, नतिजा किन सधैं अरू भन्दा यति खराब हुन्छ?
हामी पीसीआर प्रयोगहरू पनि गर्दैछौं, नतिजा किन सधैं अरू भन्दा यति खराब हुन्छ?
प्रयोगशालामा, अन्य व्यक्तिको पीसीआरमा हेर्नुहोस्, प्रवर्धन दक्षता उच्च छ, इलेक्ट्रोफोरोसिस पट्टी उत्तम छ, र तिनीहरूको आफ्नैमा हेर्नुहोस्, लामो समयसम्म गर्न गाह्रो छ, प्रतिक्रिया एकदम राम्रो छ जस्तो लाग्छ, गलत गलत परीक्षणको नतीजा के हो ..... समस्या?
मलाई विश्वास छ कि हाम्रा धेरै पार्टनरहरूले पनि विभिन्न समस्याहरूको सामना गरेका छन्। जब हामी पीसीआर प्रयोगहरूमा भित्तामा दगुर्छौं, हामी अवचेतन रूपमा प्रतिक्रिया प्रणाली भित्रका कारकहरूको विश्लेषण गर्ने छौं, तर हामी अक्सर प्रयोगहरूमा उपभोग्य चीजहरूको महत्त्वपूर्ण प्रभावलाई बेवास्ता गर्दछौं।
तपाईंको पीसीआर परिणाम गलत छ, पीसीआर उपभोग्य वस्तुहरू आवश्यक कारण हुन सक्छ। एकातिर, उपभोग्य वस्तुहरूको माइक्रो प्रदूषण वा अवरोधकर्ताहरूको परिचय प्रयोगात्मक प्रदूषणको कारण हुनेछ; अर्कोतर्फ, उपभोग्य वस्तुहरूको अनुचित चयनले प्रयोगात्मक परिणामहरूलाई पनि कष्ट दिन्छ।
समस्या फेरि आउँछ। त्यहाँ पीसीआर उपभोग्य धेरै प्रकारका छन्, त्यसोभए सही व्यक्तिहरू कसरी छनौट गर्न प्रयोग अधिक सहज बनाउन? ध्यान दिनुपर्ने समस्याहरू के हुन्? आज चिन्ता नगर्नुहोस्I धेरै बर्षको अनुभवको साथ संयुक्त रूपमा, PCR उपभोग्य छनौट सामान्य समस्याहरूको क्रमबद्ध गर्दै, म तपाईंलाई आशा गर्दछु।
Q1: PCR उपभोग्य वस्तुहरू किन प्राय: PP सामग्रीबाट बनेका हुन्छन्?
हुइडा: किनकि पीसीआर आपूर्तिहरू सामान्यतया अभिकर्मकहरू वा नमूनाहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छन्, पोलिप्रोपाइलिन (पीपी) सामग्री जैविक रूपबाट निष्क्रिय हुन्छन्, बायोमोलिकुलरको पालना गर्दैनन्, र राम्रो रासायनिक सहिष्णुता र तापमान सहिष्णुता छ (१२१ मा स्वत: घुमाउन सकिन्छ। ° सी, तापीय चक्रको बखत तापमान परिवर्तनको पनि सामना गर्न सक्छ)।
Q2: PCC ट्यूब / प्लेटहरूको बिभिन्न आकारहरू बीच मैले कसरी छनौट गर्नुपर्दछ?
HIDA: छनौटको उद्देश्य: विशेष प्रयोगात्मक आवश्यकताहरूको आधारमा सही उत्पादनहरू चयन गर्नुहोस्। पीसीआर ट्यूबको अधिकतर आकारले पीसीआर प्रतिक्रियाको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छ। यस आधारमा, पहिले कम भोल्युम ट्यूब छनौट गर्न सिफारिस गरिन्छ। किनभने कम भोल्युम ट्यूब / प्लेटमा सानो ओभरहेड ठाउँ छ, तातो चालकता सुधारिएको छ र वाष्पीकरण घटाइएको छ। उही समयमा, धेरै वा धेरै सानो नमूनाहरू थप्नेबाट जोगिन आवश्यक छ। धेरै अधिक थर्मल चालकता, spilage र पार संदूषण कम गर्न को नेतृत्व गर्न सक्छ, जबकि धेरै थोरै नमूना वाष्पीकरण गुमाउन सक्छ।
सामान्य प्रतिक्रिया ट्यूबहरूको विशिष्टता र खण्डहरू:
एकल / संयुक्त ट्यूब: ०.० मिलीलीटर, ०.२ मिलीलीटर, ०.55 मिलीलीटर
---राम्रो प्लेट: ०.२ मिलीलीटर, ०.०5 मिलीलीटर
4 384 राम्रो प्लेट: ००4 मिलीलीटर
Q3: जब नमूना मात्रा सानो छ, म एकल पाइप वा संयुक्त पाइप छनौट गर्दछु, तर किन केही समतल कभर छ र केहि उत्तल कभर छ?
Huida: जब नमूना मात्रा सानो छ, एकल ट्यूब वा संयुक्त ट्यूब मनपर्नेछ। जे होस्, जब प्रतिक्रिया भोल्युम ठूलो हुन्छ, एकल ट्यूब प्रभावशाली हुन्छ, र भोल्यूम ०. m एमएलसम्म पुग्न सक्दछ। र समतल कभर र उत्तल कभर प्रत्येकको फाइदा हुन्छ, विशिष्ट निम्न जानकारीलाई सन्दर्भित गर्न सक्दछ।
एकल ट्यूब: ०.२ मिलीलीटर र ०.ml मिलीलीटर; नमूना मात्रा लचिलो रूपमा छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
जडान ट्यूब: ०.२ मिलीलीटर वा ०. ;5 मिलीलीटर वैकल्पिक हो; Or वा १२ ट्युबहरू सामान्य छन्।
फ्लैट कभर: QPCR को लागी सही प्रतिदीप्ति संकेत प्रसारण प्रदान गर्न सक्दछ; मार्कहरू लेख्न सजिलो।
उत्तल कभर: प्रेस को कारण प्रतिक्रिया ट्यूब को विकृति कम गर्न पीसीआर उपकरण को तातो आवरण संग सम्पर्क; यद्यपि यसले फ्लुरोसेन्स सिग्नल प्रसारणमा असर पार्छ र QPCR प्रयोगमा लागू गर्न सकिँदैन।
Q4: किन केही PCR प्लेटहरूको स्कर्ट छ र केहि छैन?
हुआडा: वास्तवमा, पीसीआर प्लेटको स्कर्ट राम्रोसँग अटोमेसन अनुप्रयोगहरूमा अनुकूलित गर्न डिजाइन गरिएको हो, उपकरणको लागि स्थिर समर्थन र मेकानिकल धैर्यता प्रदान गर्ने, साथ साथै पाइप्टि। प्रक्रियाको क्रममा उच्च स्थिरता।
पीसीआर प्लेटहरू सामान्यतया गैर हेमलाइन, आधा हेमलाइन र पूर्ण हेमलाइनमा विभाजित हुन्छन्।
बिना प्लेट: प्राय: PCR मेशिन वा qPCR मेशिनहरूको लागि उपयुक्त, तर स्वचालित अनुप्रयोगहरूको लागि होईन। पाइपेटिंगको प्रक्रियामा स्थिरता उच्च छैन, त्यसैले यो प्लेट समर्थनको साथ प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
आधा स्कर्ट एज प्लेट: लेबल वा बार कोड अनुप्रयोग, र स्वचालित अनुप्रयोगमा अनुकूलन गर्न सकिन्छ, र राम्रो पाइप्टि stability स्थिरता छ।
पूर्ण स्कर्ट एज प्लेट: स्वचालित प्रयोगात्मक अनुप्रयोगहरूको लागि धेरै उपयुक्त, लेबल र बार कोडको अनुप्रयोगमा पनि अनुकूलन गर्न सकिन्छ। योसँग राम्रो मेकानिकल शक्ति छ, बल्ज मोड्युल PCR इन्स्ट्रुमेन्टमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, र पाइपेटिंगको प्रक्रियामा उच्च स्थिरता छ।
Q5 :PCR प्लेटहरूको लागि किन किन कुना र लेबलहरू एकै हुँदैनन्?
हुआडा: यो कुनाको काट्ने र मार्किंगको प्रभावमा निर्भर गर्दछ।
कुना काटना: पीसीआर प्लेटको कुनाको काट्ने स्थितिको छनौट सजीलो स्थितिको लागि उपयुक्त उपकरणको आवश्यकताहरूमा निर्भर गर्दछ।
पहिचान: PCR प्लेटहरूमा अल्फान्यूमेरिक मार्करहरूले व्यक्तिगत वेल्स र नमूना स्थानहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। सामान्य रूपमा इमोजेड रंग डिजिटल लोगो वा कुँदिएको लोगोका लागि। केही स्वचालित अनुप्रयोगहरूको लागि, छापिएको र चिन्हित प्रतिक्रिया प्लेटहरू उत्तम रूपमा छाप गरिएका छन्।
Q6: किन केही पीसीआर प्लेटहरू उत्तल हुन् जबकि अन्य सपाट छन्? कुन राम्रो छ?
Huida: के फिट हुन्छ उत्तम। त्यहाँ दुई प्रकारका सामान्य पीसीआर प्लेटहरू छन्: सपाट पोर मार्जिन र उच्च पोर मार्जिन।
फ्लैट होल मार्जिन प्रतिक्रिया प्लेट, अधिकतम पीसीआर उपकरणका लागि उपयुक्त।
उदीयमान ओरिफिस किनाराहरूका साथ प्रतिक्रिया प्लेटहरूले झिल्ली सील गर्ने सुविधा प्रदान गर्दछ र नमूनाहरू बीच क्रस-संक्रमणको जोखिम कम गर्दछ।
Huida पीसीआर उत्पादनहरु र उद्योग को उच्च मापदण्डहरु को उत्पादन र प्रसंस्करण मा धेरै वर्षको अनुभव छ। उत्पाद लाइन धनी छ र पीसीआर प्रयोगात्मक अनुप्रयोगहरूको विशाल बहुमत पूरा गर्न सक्दछ। आउँनुहोस् र तपाईंको प्रयोगात्मक अनुप्रयोगहरूका लागि सही उत्पादनहरू छनौट गर्नुहोस्।